Indlu entle ekufutshane nesithuthi embindini wedolophu - I-Airbnb
Indlu entle ekufutshane nesithuthi embindini wedolophu
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguDebbie
Indlu yam ethe tyaba ikwindlela enkulu ephuma ku-M4 kwisiphambuka sama-46 okanye sama-47 esingena kwiziko laseSwansea. Ndikwindlela yebhasi ephambili kum nje imizuzu embalwa yokuqhuba usuka kuloliwe waseSwansea kunye nezikhululo zeebhasi nazo zonke iindawo zokuthengisa ezikufutshane nokubandakanya iAldi, iM & S kunye neTesco. Ibala lemidlalo leLiberty kunye ne-Singleton Park zisondele ngokwaneleyo ukuba abalandeli bazimase iigigi kunye nemidlalo. Sikwakuhambo lwemizuzu embalwa ukusuka kwi-DVLA kunye nendlela ephakathi phakathi kweMorriston kunye neSibhedlele saseSingleton ukuba ulapha ngeshishini.
Indlu yam isembindini woluntu olunobuhlobo kunye neevenkile ezininzi zosapho ezikumgama ohamba lula kunye neevenkile ezinkulu kumgama nje wemizuzu embalwa.
Kwikhaya lethu uya kuba negumbi lokulala elipholileyo elinesibini, igumbi lokuhlambela labucala elikufutshane, indawo yokuhlala / igumbi leTV kunye ne-WIFI ebalaseleyo. Kukho ipaki ethandekayo ngaphakathi kwemizuzu embalwa yokuhamba kunye nezinye iindawo ezininzi ezintle onokuhamba kuzo ngaphakathi kwemizuzu eli-10 yokuqhuba. Ukuqala kweGower National Park kunye nazo zonke iilwandle zayo ezintle kungaphantsi kwemizuzu engama-20.
4.82 · Izimvo eziyi-39
Uya kufumana uluntu lwethu lunobuhlobo kakhulu kwaye luluncedo kwiipaki zalapha, iivenkile kunye neendawo zokutyela. Kukho indawo yokuhlambela egqwesileyo kumgama nje ongemizuzu embalwa apho abasebenzi baya kuhlamba, bayomise kwaye basonge iwashing yakho ngexabiso elifanelekileyo. Iindlela zethu eziphambili ezinqumlayo zikhokelela kuM4, Llanelli, Gower, Mumbles kunye nazo zonke iibheyi.
I a single woman who is happy likes company this is why I have choosen to be a host .
I like good food and I like travel enjoy music, theatre ,reading walking .
Ndiyathanda ukuncokola neendwendwe njengoko zindixelela ukuba ndingumthombo wolwazi lwasekuhlaleni njengoko ndiye ndanceda abafundi neendwendwe ezininzi ukuba zifumane indawo yokuhlala ixesha elide ngaphambi kokuba kutshanje zijoyine u-Airbnb njengombuki zindwendwe.
Ndiyathanda ukuncokola neendwendwe njengoko zindixelela ukuba ndingumthombo wolwazi lwasekuhlaleni njengoko ndiye ndanceda abafundi neendwendwe ezininzi ukuba zifumane indawo yokuh…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Fforest-fach